TKMyanmarEnglish – Page2– TK
TKMyanmarEnglish	Lessons	August 12, 2019
Lesson 37 : Bob Marley – Get Up Stand Up သီချင်းနဲ့ လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ အခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်း နေ့စဉ်သုံးစကား ပြောကိုရမယ်လို့ ကျနော်ကယုံကြည်သူပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမပိုင်သေးပဲ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မကျော်သွားဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်။
TKMyanmarEnglish	Lessons	August 11, 2019
Lesson 36 : Grammar – What isasentence? Four main kinds of sentences and Four types of sentence structures. သင်ခန်းစာ အနည်းဆုံး 20 အထိလုံးဝ ပိုင်မှသာ ဒီသင်ခန်းစာ ကို လေ့လာပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်း နေ့စဉ်သုံးစကား ပြောကိုရမယ်လို့ ကျနော်ကယုံကြည်သူပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမပိုင်သေးပဲ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မကျော်သွားဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်။
TKMyanmarEnglish	Lessons	August 7, 2019
Lesson 35 : Types of Verbs .. HLA : Helping Linking Action အခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်း နေ့စဉ်သုံးစကား ပြောကိုရမယ်လို့ ကျနော်ကယုံကြည်သူပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမပိုင်သေးပဲ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မကျော်သွားဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်။
TKMyanmarEnglish	Lessons	August 2, 2019
Lesson 34 : Heathens (တမူထူးခြား လူနည်းစု) English Vacabulary and its usage. အခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်း နေ့စဉ်သုံးစကား ပြောကိုရမယ်လို့ ကျနော်ကယုံကြည်သူပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမပိုင်သေးပဲ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မကျော်သွားဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်။
TKMyanmarEnglish	Lessons	July 24, 2019
Lesson 33: Prepositions တွေကို ဝေါဟာရ တခုချင်းစီနဲ့ တွဲမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Time; Place; Direction. အခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်း နေ့စဉ်သုံးစကား ပြောကိုရမယ်လို့ ကျနော်ကယုံကြည်သူပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမပိုင်သေးပဲ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မကျော်သွားဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်။